के हो टन्सिलाइटिस ? - स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
समयमै उपचार नगरे मुटु र मृगौलासम्बन्धी जटिलता
‘टन्सिलले अबका चार महिना बढी दु:ख दिन्छ, मुख्यत: ३–८ वर्षका बालबालिकालाई यसले बढी सताउने गर्छ’
आश्विन २१, २०७४-बालबालिकामा देखिने टन्सिलको समस्यालाई प्राय: हामी मामुली ठान्ने गर्छौं । टन्सिल दुख्ने सामान्य समस्याको उचित उपचार नभए भविष्यमा मुटुको भल्भ बिग्रिने, बाथ, मुटु रोग हुन सक्छ । यो रोगले गर्दा मुटुको शल्यक्रिया गरेर भल्भ फेर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । रोगीले शल्यक्रियापछि समेत जीवनभर औषधि खाइराख्नुपर्ने हुन्छ ।
टन्सिलले अबका चार महिना बढी दु:ख दिने उल्लेख गर्दै वरिष्ठ कान, नाक, घाँटी विशेषज्ञ डा. राकेशप्रसाद श्रीवास्तव भन्छन्, ‘वयस्कलाई यो समस्या देखिए पनि मुख्यत: ३ देखि ८ वर्षका बालबालिकालाई यसले बढी सताउने गर्छ ।’
हाम्रो मुलुकमा टन्सिलको समस्याबारे कुनै विस्तृत अध्ययन भएको छैन । अमेरिकन एकेडेमी अफ ओटोल्यारिङ्गोलजी हेड एन्ड नेक सर्जरीका अनुसार, अमेरिकाका करिब सबै बालबालिका कम्तीमा एक पटक टन्सिलको समस्याले आक्रान्त हुने गर्छन् । चिकित्सा र शल्यक्रियाको क्षेत्रमा उपचारको प्रगतिले गर्दा हाल टन्सिलबाट उत्पन्न जटिलताका कारण मृत्यु हुने घटना बन्दप्राय: भएको छ ।
यो मुख्यत: भाइरस वा ब्याक्टेरियाको संक्रमणले गर्दा हुन्छ । भाइरसले गर्दा हुने टन्सिलाइटिसमा लाक्षणिकबाहेक कुनै खास उपचार आवश्यक नरहेको आंैल्याउँदै डा. श्रीवास्तव भन्छन्, ‘ब्याक्टेरियाले गर्दा संक्रमण भएको भए एन्टिबायोटिकको माध्यमले उपचार गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन सक्छ ।’
तर, तपाईंलाई भाइरस ब्याक्टेरियाको संक्रमणले गर्दा टन्सिलाइटिस भएको हो भन्ने कुरा सामान्य व्यक्तिले छुट्टयाउन सक्दैन । भाइरसले गर्दा हुने यो समस्यामा टन्सिलमा रातोपना देखिन्छ, यसमा पस प्वाइन्ट (पिप भरिएको ठाउँ) देखिँदैन । तर ब्याक्टेरियाले गर्दा यो संक्रमण भए टन्सिलमा पिप भरिएको ठाउँ देखिन्छ, घाँटीको ग्रन्थी सुन्निन्छ ।
भाइरसले हुने यो समस्या ५–६ दिनसम्म रहन्छ । ब्याक्टेरियाले गर्दा हुने टन्सिलाइटिस ८–१० दिनसम्म लम्बिन सक्ने डा. श्रीवास्तव बताउँछन् ।
बालबालिका र वयस्कमा टन्सिलाइटिसको लक्षण उस्तै हुन्छ । एक पटक टन्सिलाइटिस भएपछि पुन: ६ महिनामा हुनु सामान्य नै हो । तर यदि वर्षमा ५ पटक वा योभन्दा बढी यो समस्या देखियो भने यसलाई ‘क्रोनिक/पुरानो’ समस्या ठानेर शल्यक्रिया गर्ने सुझावसमेत दिइन्छ ।
टोन्सिल्याक्टोमी नामक शल्यक्रियाको माध्यमले टन्सिललाई झिक्नु कतिपय समय आवश्यक भए पनि यो गराउनुभन्दा अघि दुई तीन जना विशेषज्ञको सल्लाह लिनु राम्रो मानिन्छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको सल्लाहमा अन्य विकल्प नहुँदा बारम्बार यो समस्याले दु:ख दिन थाले मात्र टन्सिलको शल्यक्रिया गरिन्छ । अर्थात्, बारम्बार टन्सिलाइटिस हुनु भनेको टन्सिल नै अति कमजोर हुनु हो, त्यसैले यसले शरीरको रक्षा गर्न सकिरहेको हँुदैन । यस्तो अवस्थामा टन्सिलले ब्याक्टेरियालाई आफूभित्र लुकाएर राख्ने काम मात्र गर्छ । टन्सिलाइटिसको समस्या हुने अधिकांशले पसलेसँग सोधेर औषधि सेवन गर्ने तथ्य औंल्याउँदै डा. श्रीवास्तव सचेत गराउँछन्, ‘तपाईंलाई एन्टिबायोटिक आवश्यक छ वा छैन, वा कस्तो लाक्षणिक उपचार चाहिन्छ भन्ने निर्णय चिकित्सकलाई गर्न दिनु नै बुद्घिमानी हो ।’
केही टन्सिलाइटिसमा एन्टिबायोटिकलगायतका औषधिले उपचार गर्नु आवश्यक हुने जनाउँदै डा. श्रीवास्तव भन्छन्, ‘विशेषज्ञको माध्यमले वास्तविक समस्या पहिचान नगरी सय रुपैयाँभन्दा सस्तो एन्टिबायोटिक सेवन नगर्नुको दण्ड भविष्यमा मुटु रोग, भल्भसम्बन्धी विकृति, मृगौलालगायतका जटिलताले चुकाउनु परेको तथ्य पनि सबैसामु छर्लङ्गै छ ।’ टन्सिल हुँदा चिसो/गुलियो बार्नुको वैज्ञानिक तथ्य छैन ।
टन्सिलाइटिसको समस्या देखिनेबित्तिकै हाम्रो समाजमा चिसो, गुलियोलगायत बार्ने चलन छ । तर यसका पछाडि कुनै वैज्ञानिक तथ्य छैन । ‘चिकित्सकले चिसो, अमिलो, पिरो आदि नखाने सल्लाह बिरामीको सन्तुष्टिका लागि मात्र दिन्छन् । यो बार्नु पछाडि कुनै वैज्ञानिक तथ्य छैन,’ डा. श्रीवास्तव भन्छन्, ‘टन्सिलमा केही बार्नु आवश्यक छैन ।’
हाम्रो मुखभित्र घाँटीका दुवैतर्फ देखिने बदाम आकारको अंग नै टन्सिल हो । टन्सिल लिम्फेटिक प्रणालीको एउटा खण्ड हो । यो प्रणालीले संक्रमणलाई हटाएर शरीरको तरल पदार्थलाई सन्तुलनमा राख्छ ।
यसैले टन्सिललाई घाँटीको द्वारपालसमेत भन्ने गरिन्छ । टन्सिलले हामीलाई मुख र नाकबाट आउने कुनै पनि रोगाणुहरूलाई शरीर भित्र जान दिँदैन । अर्थात्, बाहिरी संक्रमणबाट जोगाउँछ ।
हाम्रो टन्सिलमा हुने संक्रमणलाई नै टन्सिलाइटिस भनिन्छ । टन्सिलले मुख वा नाकको माध्यमले शरीरमा प्रवेश गर्न लागेको जीवाणुसँग भिडेर यसलाई सखाप पार्ने गर्छ र यस क्रममा कहिलकाहीं आफू सुन्निएर संक्रमितसमेत हुने गर्छ । यसो हुँदा हामीले आफूलाई टन्सिलाइटिस भएको भन्छौं ।
यदि हाम्रो टन्सिल बलियो छ भने यसले हाम्रो शरीरमा रोगलाई जानबाट रोक्नुको साथै आफू पनि रोग वा संक्रमणबाट बच्छ । यो संक्रमण ब्याक्टेरिया वा भाइरसले गर्दा हुन्छ । तर यो ढुसी र परजीवीले गर्दा पनि हुन सक्छ । अर्थात्, टन्सिल सुन्निनु नै टन्सिलाइटिस हो । यसअन्तर्गत कहिलेकाहीं घाँटीको ग्रन्थी पनि सुन्निन्छ ।
टन्सिल सर्छ ?
टन्सिल एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्ने रोग होइन । तर टन्सिलाइटिस उत्पन्न गर्ने भाइरस र ब्याक्टेरिया एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्न सक्छ ।
खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा टन्सिलाइटिस उत्पन्न गर्ने भाइरस वा ब्याक्टेरिया संक्रमित व्यक्तिबाट स्वस्थ व्यक्तिको शरीरमा प्रवेश गर्न सक्छ । यसैले बालबालिकालाई संक्रमणबाट जोगाउन टन्सिलाइटिस वा घाँटीको दुखाइ भएकाहरूको सम्पर्कमा राख्नु हुँदैन । निरन्तर साबुनपानीले हात धुने गर्दा यो संक्रमणबाट बँच्न सकिन्छ ।
घाँटीको ग्रन्थी सुन्निनु
टन्सिल रातो देखिनु
टन्सिलमा सेतो वा पहेँलो तह देखिनु
खाना/थुक निल्दा अप्ठयारो हुनु
असमय कपाल फुल्नु मुटुको कमजोरीको संकेत ›
असमय कपाल फुल्नु मुटुको कमजोरीको संकेतआश्विन २१, २०७४पूरा पढ्नुहोस्